Airways New Zealand waxay ka furaysaa xarun jilista hagida hawada sare (ATC) xarunta Beirut, Lubnaan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Airways New Zealand waxay ka furaysaa xarun jilista hagida hawada sare (ATC) xarunta Beirut, Lubnaan
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Lubnaan • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Technology • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
In xaflad muhiim ah oo lagu qabtay Beirut shalay, Airways New Zealand iyo Agaasinka Guud ee Duulista Rayidka (DGCA) Lubnaan waxay si rasmi ah u fureen xarun jilista hagista hawada sare (ATC) - tababarka mustaqbalka ATC ee Lubnaan muddo tobanaan sano ah.
Airways International, oo ah gacanta ganacsiga ee bixiyaha adeegga hagista hawada ee New Zealand, ayaa dhameystirtay rakibidda aaladda TotalControl LCD simulator-ka iyo laba simulators radar / non-radar at Beirut-Rafic Hariri International Airport ka dib mashruuc socday 12 bilood. Xarunta, oo loogu talagalay in lagu tababaro ilaaliyayaasha ATC ee DGCA iyo ardayda iyadoo la adeegsanayo astaamo tusaalayaal ah oo la jaanqaadaya dunida dhabta ah, ayaa hadda si buuxda loo hawlgeliyay ka dib markii la dhammaystiray imtixaankii aqbalaadda goobta toddobaadkan.
Wasiirka Howlaha Guud iyo Gaadiidka Lubnaan Youssef Fenianos ayaa si rasmi ah u furay xarunta jilitaanka xaflad ay ka soo qeyb galeen Dowlada Lubnaan iyo wufuudda DGCA Lubnaan, iyo sidoo kale Hay’ada Duulista Rayidka ee Caalamiga (ICAO), Airways iyo Saraakiisha New Zealand ee Ganacsiga iyo Shirkadaha kuwaas oo u safray Lubnaan. calaamadee taariikhda muhiimka ah. Qandaraaska dhismaha iyo rakibida jilitaanka wuxuu udhaxeeyey Airways International iyo ICAO isagoo matalaya DGCA Lebanon.
Maamulaha guud ee Airways, Sharon Cooke, wuxuu sheegay in ururku uu ku faano inuu taageero DGCA iyada oo la siinayo teknolojiyad jilitaan heer caalami ah. “Airways waxay ku faraxsan tahay inay calaamadeyso dhacdadan kadib markii ay horseedday mashruucan istiraatiijiyadeed ee muhiimka u ah DGCA iyo Dowladda Lubnaan. Waxaan rajeyneynaa inaan sii horumarino iskaashigan maadaama DGCA ay dhiseyso awoodooda tababarka ATC, ”Ms Cooke ayaa tiri.
Agaasimaha DGCA Lubnaan Agaasimaha Waaxda Nawaaxiga Hawada Kamal Nassereddine ayaa sheegay in simulator-ka TotalControl ee Airways uu ahaa kii ugu haboonaa ee buuxiya shuruudaha muhiimka ah ee DGCA, oo ay kujireen geesinimo hor leh, sawiro sawir macquul ah iyo sahlanaanta isticmaalka.
Aad ayaan ula dhacnay Airways intii mashruucu socday. Waxay ahaayeen kuwo daacad ah oo dabacsan, waxayna iskaashi la sameeyeen DGCA si ay noo siiso jilitaanka ugu fiican ee ujeeddada ujeeddada leh. Airways waxay leedahay sumcad adag sida khabiir caalami ah oo ku saabsan jilitaanka iyo tababarka ATC - tababarka aan helnay waa mid gaar ah, ”ayuu yiri Mr Nassereddine.
Jaangooyeyaasha TotalControl ee lagu rakibay xarunta DGCA ee Madaarka Caalamiga ah ee Beirut waxay ku dayanayaan gobolka macluumaadka duulimaadka hawada ee Lubnaan oo buuxa, iyadoo la adeegsanayo sawirro sawir-dhab ah oo daacadnimo sare leh oo loogu talagalay munaaradda iyo ku dayashada nidaamka ATM ee loogu talagalay radar. Duuliyayaasha jilitaanka DGCA waxay si dhakhso leh u abuuri karaan una ansaxin karaan layliyo, tababar yarna waxay si fudud u maareyn karaan xaaladaha adag ee la moodo.
Tiknoolajiyadda jilitaanka guud ee Airways waxay sare u qaadeysaa tayada iyo xawaaraha tababarka ATC, iyadoo si weyn u yareyneysa waqtiga tababarka shaqada halka warshadaha adduunka oo dhan ay saaran yihiin cadaadis dheeraad ah si ay u tababaraan ilaaliyeyaasha taraafikada hawada oo ku filan baahida. Waxaa soo diyaariyay Airways oo kaashanaysa khubaro 3D-ku salaysan oo xarunteedu tahay New Zealand Cilmi -baarista Animation Ltd, Jaangooyeyaasha TotalControl ayaa loo qaabeyn karaa si ay ula kulmaan baahiyaha gaarka ah ee loo yaqaan 'ANSPs'.
Airways ayaa in ka badan 20 sano u gudbineysay xalka tababarka ATC iyo adeegyada la talinta gobolka Bariga Dhexe. Labadii sano ee la soo dhaafay hay'addu waxay tababaro u fidisay macaamiil muhiim ah oo ku kala sugan Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait iyo Bahrain.
Sheekadeena Jaceyl ee Jasiiradaha quruxda badan ee Seychelles
Joojinta Carnival Cruise Glory baajinta New Orleans ...
Algeria ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jartay Morocco
Ma jiro karantiil: Abu Dhabi wuxuu u furan yahay si buuxda loo tallaalo ...
Qaraxyo badan ayaa ruxay bartamaha Moscow, dhaawacyada ...
UNICEF si ay u siiso Midowga Afrika 220 Milyan oo Doos ...
Israa’iil waxay codsaneysaa caawimaad iyada oo dab weyn oo duurjoog ah uu ka socdo bannaanka ...
Barashada Bandhigga Hore ee Bilaashka ah ee IMEX America
Eeyaha urinaya COVID-19 oo imanaya Madaarka Miami
Kordhinta Awoodda Hawada ee Wizz ayaa laga yaabaa inay midho dhasho
Qatar Airways ayaa labalaabaysa duulimaadyada Lagos
WestJet waxay taageertaa Tallaalka qasabka ah ee Diyaaradda ...
Dalxiiska cas ayaa ka qarxay Shiinaha 2021
Dhididka Dambiilaha ah oo Sabab u Noqonaya Kacsanaan ka timaada Spain si ay ...
Saber iyo Virgin Australia waxay cusbooneysiinayaan qaybinta adduunka ...
Cudurka faafa ee 'COVID-19' wuxuu baabi'iyaa awoodda baasaboorrada qaaliga ah
Sidee Abaabulka Isbeddelka Cimilada “Pet Tree” u Caawin doonaa ...
Madaxweynaha Haiti iyo marwadiisa koowaad ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday ...
Madaxweynaha Tansaaniya: Tirada koowaad ee ololaha dalxiiska ee ...
Frontier waxay Duulimaadyo aan joogsi lahayn ka bilawdaa Denver ...
Eswatini oo lagu qabtay inta u dhaxeysa Taiwan iyo Shiinaha micnaheedu waa weyn ...
Koorsooyinka golf -ka/huteelada ugu caansan Mareykanka
Afganistan oo laga soo daadgureeyay Uganda: sababta hoteellada ...
Bandhigga Renaissance ee Brussels ayaa soo laabtay berri
Soo kabashada Tirada Rakaabka ayaa kasocota FRAPORT
Waxqabadka heshiisyada Safarka iyo Dalxiiska ayaa kor u kacay 39.6% bishii Juun
Poland ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogtay xadka Belarus ...